Company overview - JP Markets
Ukubuka konke kwebhizinisi
Izimakethe ze-JP iyinhlangano ye-Forex yemhlaba jikelele. Siqale ukusebenza kwethu ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi sakhulile ngenxa yobuhlobo obuhle kakhulu namaklayenti ethu. Saqala amancane, nabantu abambalwa kanye nehhovisi elincane, kodwa namhlanje sinamahhovisi emazweni amaningi anabantu abaningana abasebenza ngaphakathi kwabo.
Sifeze impumelelo yethu ngenxa yokuthi sisebenza kanjani ngokuphumelelayo namakhasimende ethu. Esinye isikhalazo abantu abaningi abanabo mayelana nabathengisi banokuthi bahweba ngamakhasimende abo. Amaklayenti ethu abhekene nezinkinga ezinjalo.
Izimakethe ze-JP zibeka izindinganiso eziphakeme ezinsizakalweni zayo ngoba ikhwalithi injengoba isinqumo esiphezulu kithi njengamakhasimende ethu. Sikholelwa ukuthi izinsizakalo zezezimali ezehlukene zidinga ukuxhumeka ekucabangeni kanye nenqubomgomo ehlanganisiwe yezimiso zebhizinisi.
Inhloso yethu ukuhambisana nezidingo zomakethe zomhlaba wonke futhi sibheke imigomo yethu yokutshala izimali ngamakhasimende ngomoya ovulekile.
AmaMakethe weJP aqhubeka ekhula nsuku zonke ngenxa yokuzethemba kwamakhasimende ethu kithi. Sinelayisense futhi silawulwa yiBhodi Yezinkonzo Zezezimali, eNingizimu Afrika, i-FSP 46855.
Singabantu baseNingizimu Afrika kanye nomthengisi omkhulu we-Forex wase-Afrika. Siye sakhula kakhulu ezinyangeni ezimbalwa zokugcina esiye senezela eKenya, ePakistan naseBangladesh.